छोराको अन्तै माया बसेपछि ससुराले गरे हुनेवाला बुहारीसँग विवाह - नागरिक रैबार
छोराको अन्तै माया बसेका कारण एक ससुराले आफ्नी हुनेवाला बुहारीसँग बिहे गरेका छन्। घटना भारतको हो। बिहारमा ६५ वर्षका रोशन लालले २१ वर्षकी कन्यासँग विवाह गरेका हुन।
रोशन लालको छोराको विवाह सपना नामकी कन्यासँग हुनेवाला थियो। जन्ती कन्याको घरको ढोकामा पुगेको थियो तर रोशनको छोरा मण्डपबाट एकाएक भागे। छोरा मण्डपबाट भागेपछि बुवा नै मण्डपमा बस्न परेको थियो।
कन्या पक्षले जन्ती खाली हात फर्कदा केटी पक्षको बदनामी हुने बताएपछि दुई परिवारको इज्जत बचाउन रोशन आफै मण्डपमा बसेर विवाह सम्पन्न गरेका हुन्। उनको छोरा अन्य युवतीसँग माया बसेका कारण मण्डप मण्डपबाट भागेका थिए। एजेन्सी
मालान बने टी- २० को नम्बर वान ब्याट्सम्यान
काठमाडौं । हाम्रो सामाजिक परम्परा अनुसार बिहेपछि महिलाहरु जन्मघर छाडेर पतिको घर जान्छन् । यद्यपि अपवादको रुपमा कतिपय पुरुषहरु ससुरालीमा घरज्वाइँ पनि बस्ने गरेका हुन्छन् । उता छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा पूरै गाउँ नै घरज्वाइँहरुले भरिएको छ । उक्त गाउँको प्रचलन अनुसार त्यहाँका चेलीहरु बिहेपछि पतिको घर जाँदैनन्, उल्टै उनीहरुका पति ससुराली आएर बस्दछन् । […]
बिरालोलाई ‘सेक्युरिटी गार्ड’को जागिर !
एजेन्सी- हाल कोरोना महामारीका कारण विश्व त्रस्त छ । यो विषम परिस्थितिमा धेरै मानिसले जागिरबाट हात धुनु परेको छ । कोही जागिरमा जाँदा कोरोना संक्रमण हुने पो हो कि ? भन्ने चिन्तामा छन् । विश्वमा धेरै मानिस कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार बनिरहँदा अष्ट्रेलियामा भने एउटा बिरालोलाई सेक्युरिटी गार्डको जागिर दिइएको छ । त्यो पनि अस्पतालको […]
नेपालकै छैटौँ कोरोना सङ्क्रमित बागलुङ नगरपालिका–३ की ६५ वर्षीया मनकुमारी पौडेलले कोरोनामुक्त भएर अस्पतालबाट बाहिरिने क्रममा भनेकी थिइन्, “मैले आत्मबल र तातोपानी खाएरै कोरोना जितेँ ।” धौलागिरि अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गराएकी उनलाई दुई हप्ताको बीचमा एक दिन उच्च रक्तचापबाहेक कुनै पनि औषधिको प्रयोग गर्नुपरेन । चैतमा पहिलो पटक देखिएका दुई सङ्क्रमितको एकै स्वर थियो, “स्वास्थ्यकर्मीको […]